Accueil > Gazetin'ny nosy > Fety : Vita ny fetin’i Barea fa ahoana ny fiainampirenena?
Fety : Vita ny fetin’i Barea fa ahoana ny fiainampirenena?
Tena mbola tsy nisy fety makotrokotroka noho ny nahatongavan’ny BAREA na ny ekipam-pirenena Malagasy niady ny fiadiana ny tompon-dakan’i Afrika CAN 2019 izay natao tany Egypta ny volana jona sy jolay 2019 iny. Tena zava-dehibe tokoa hoan’i Malagasy iny satria tafakatra teo amin’ny dingan’ny ¼ dalana ny Malagasy. Nandritra ny volana jona manontolo dia tsy nisy resaka raha tsy ny fandresen’ny Barea ny ekipa nifanandrina taminy. Ny Malagasy sasany aza dia efa nanonofy atoandro fa hibata ny amboara.
Vita iny ny fety ka ny filohampirenena Andry Nirina Rajoelina mihitsy no isan’ny nitarika ny fanohanana ny ekipam-pirenena ity ka tonga nitondra Malagasy maherin’ny 500 tany Egypta mihitsy indroa miantoana mba hanohanana ity ekipam-pirenena ity. Tena nampietana ny vahoaka izany ary sambany koa teo amin’ny tantara.
Isan’ny fihetsiketsehana nalaza indrindra tamin’ny ady iraisam-pirenena nataon’ny vahoaka Malagasy iny, dia ny fahazoana ny fiverenan’ny fahaleovantena n’i Madagasikara ny 14 oktobra 1958, ary ny fametrahana ny repoblika Malagasy ny 26 jona 1960. Manaraka izany dia nalaza izay tsy izy koa ny fiverenan’ingahy Capitain de Corvette Didier Ratsiraka izay minisitry ny raharaham-bahiny ny governemanta tetezamita ny Jeneraly Gabriel Ramanantsoa ny “accord de cooperation” tamin’ny frantsay tamin’ny taona 1973.
Ny zava-dehibe tamin’ny fandresen’ny Barea iny dia ny filazan’ny filohampirenena Andry Nirina Rajoelina fa hohatsaraina ny kianja-ben’i Mahamasina ka hatao izay hahazakany mpijery baolina 50 000 na 60 000 eo raha toa ka 35 000 izany amin’izao fotoana izao. Zava-dehibe izany ka enga anie ka hanomboka haingana ny asa.
Faly dia faly ny Malagasy noho iny fandresena iny. Mbola tsy nisy toa izany ny firaisankinam-pirenena tao anatin’ny 40 taona teo ho eo. Feno sainam-pirenena mihofahofa ny toerana rehetra manerana an’i Madagasikara.
Vita izay ny fetin’ny Barea ka ahoana no fiainambahoaka? Hitohy ve iny firaisankinam-pirenena?
Ny zava-misy dia mahantra ny 92% ny Malagasy amin’izao fotoana izao. Misy mihitsy aza no manana tarehimarika fa ny Malagasy 98% dia efa mahantra avokoa. Noho izany tsy maintsy mieritreritra ny fiainampirenena indray ary miatrika ny tetika hoentin’ny fanjakana hialana amin’izany olana goavana lehibe izany.
Amin’ny fiainana politika dia hivory manomboka rahampitso talata faha 16 jolay 2019 ny antenimierampirenena vaovao hifidy ny birao maharitra. Iankinan-javatra maro eto amin’ny firenena io. Ny asa fanaovan-dalàna manontolo izay miantoka ny asan’ny governemanta sy ny filohan’ny repoblika no zava-dehibe amin’izay olona ho filohan’ny antenimierampirenena eo. Ny zava-misy aloha raha ny resaka mandeha dia ny iray amin’ireto olona ireto: Rabenirina Jean Jacques, Fienena Richard, Irma Naharimamy ary Razanamahasoa Christine. Ireo no anarana re etsy sy eroa ankehitriny izay hisafidianan’ingahy Andry Nirina Rajoelina ka hatolony hofidin’ny depiote. Dia ho hita eo izany izay olona tena atokisan’ingahy Rajoelina amin’izy efatra mianadahy ireo.
Eo amin’ny resaka tsy fandriampahalemana dia mbola maro ny toerana anjakan’ny dahalo sy ny jiolahy manerana an’i Madagasikara. Marina fa efa misy ny ezaka vita amin’ny faritra maro hafa koa saingy mbola tsy ampy hoy ny mponina. Miandry ny fampiasana ireo fitaovana novidin’ny fitondram-panjakana ireo ny vahoaka ankehitriny.
Mahakasikaka ny fiainam-bahoaka manokana dia mbola tsy hita taratra ny mety ho fiovana. Tsy hita mivantana ny fiatraikan’ny IEM (initiative pour l’émergence de Madagasikara) amin’ny asa fampandrosoana.
Mahakasika ny fanatanjahantena manokana dia ahoana ny vokatra mety ho azon-tsika Malagasy amin’ny lalaon’ny Nosy any Maurice izay manomboka amin’ny zoma faha 19 jolay 2019. Ny lalaon’ny Nosy no handrefesana ny fandrosoan’ny fanatanjahantena Malagasy.
Miandry ny fampandrosoana avokoa ny sokajin’olona rehetra ary maniry raha maniry koa fa hahitana fahagaga toa ny Barea iny ny fampandrosoana ny firenena.